🥇 ▷ Dawn of Zombies: Badbaadinta leh waxyaalo badan oo la mid ah maalinta ugu dambeysa ee adduunka ✅
Dawn of Zombies: Badbaadinta leh waxyaalo badan oo la mid ah maalinta ugu dambeysa ee adduunka
Dawn of Zombies: Badbaadin (haa, haa, ciyaar kale oo zombie ah) ayaa timaada Play Store si aad u noqoto ciyaar badbaado weyn, laakiin maxaa yeelay waxay la mid tahay maalinta ugu dambeysa ee Dunida weyn, waxaad lumineysaa nimcadii oo dhan markii aad bilowdo inaad ogaato inaysan waxba soo saarin.
Caqli ahaan waxaad dhihi kartaa inay ciyaaro badan la sameeyaan kuwa kale, laakiin markii aad bilowdo ciyaarta oo aad taas aragto Waa inaad horay u dhisaa mootada leh qaybo Sida miisaska kale ee farshaxanka, iyo gaar ahaan markay qolal dhan yihiin, waxaad ku wareersan tahay sanka aad yeelan karto. Hey, waa bandhig muuqaal ahaan ah, laakiin boqorka halkan waa Maalinta ugu Dambeysa ee Dunida.
Maaha markii ugu horraysay ee ay dhacdo
Markii aan bilaabay inaan ciyaaro Maalintii ugu dambeysay Dhulka, bilood kadib, in ka badan nuqullo ku filan ayaa soo muuqday. Waxa kaliya ee uu helay waxay ahayd inuu caan ka dhigo sumcadda asalka ah oo sidaas noqota mid ka mid ah badbaadintii ugu fiicnaa ee aan maanta haysanno ee ku saabsan mobiladeena.
Dawn of Zombies: Badbaadin waxay na siisaa isla gameplay iyo waxyaalaha la midka ah ee iska cad si muuqata oo aan aad ugu baahan nahay inaan ciyaarno. Iyada oo la fahamsan yahay inaan u baahan nahay inaan soo uruurinno agab, in aragtida isometriisku ay isku mid tahay oo ay xitaa leedahay qodobbadaas farshaxanimada oo ay si cad u soo koobi karto asalka iyo boqorka, waxaad tahay xoogaa wareersan.
Horeba hadaad dhammeyso howlgalladii ugu horreeyay iyo waa inaad tagtaa ceelka, taas oo ah xadka joogitaanka gurigaaga, si aad u hesho khariidad u dhiganta tan asalka ah, in kastoo ay ku kala duwan yihiin muuqaalka muuqaalka halkii la arki lahaa. Waxaan u lebisnay qaab ka fiican, laakiin nafta ayaa isagu ah.
Farqiga u dhexeeya Dawn ee Zombies: Badbaado
Mana tirtiri doono shaqadii ay sameeyeen soosaarayaasha ciyaartaan cusub. Waxaan kala sooci karnaa suurtagalnimada dhismaha dhismeyaasha dhulka hoostiisa iyo waxaas oo dhan oo ah inaan soo helno waa 150 diyaaradood ee hubka, hubka iyo gawaarida iyo 60ka nooc ee hubka sida Makarov, M16 iyo inbadan…
Maaha in ay tahay wax ka duwan, laakiin waa wax aad u kooban, in kasta oo aad ku raaxeysan karto dhismaha robot basaas si ay u hareereeyaan gabaadyada ciyaartoyga kale ee qaabka PvP, inkasta oo tan ay tahay halkii Waxay noqon doontaa koox kuu tagaysa markii aad guriga joogtid. Waxaan seegnay hab-waqtiga dhabta ah oo aad kula dagaallami karto ciyaartoy kale.
Mid kale oo ka mid ah ‘punzos’ oo lahaa asalka, laakiin inkasta oo ay runtii ahaayeen mashiinka gacanta lagu hayo; Annagu garan mayno haddii sannadihii la soo dhaafay ay isku darsadeen ciyaartoy badan waqtiga dhabta ah ee siiya chicha badan ciyaaraha noocan ah.
Kumanaan-bixiye ayaa imaan doona
Dawn of Zombies: Badbaadin waxaad heli doontaa nooc badan oo dhan oo ka dhan ah dhan ama PvP iyo dejinta halka aad kula xiriiri karto ciyaartoy kale. Waxay umuuqataa inay hilibka oo dhan ku ridi doonaan jiirka ku jira dhulal badan, sidaa darteed ugu yaraan halkaan waad ka fogaan kartaa naftaada asalka ah; Hadday markii hore sameyn lahaayeen, hubaal waxaan ku bilaabi lahayn qodobka si ka duwan.
Farsamo ahaan waa mid aad u mudan tayada muuqaalka weyn ee Dawn of Zombies: Badbaado. Waxba kuma dhumineyso oo iftiimineysa nalalka iyo saameyntooda, waxaana liiskaas si fiican u shaqeeyay. Waa ciyaar si muuqaal ah u soo jiidata dareen badan oo haddii aad haysatid qaar ka mid ah taleefannada cusub ee sanadkaan waxaad ku raaxeysan doontaa quruxda laga soo qaatay shaashaddooda.
Dawn of Zombies: Badbaadintu waxay u noqonaysaa tusaale cad oo ku saabsan Maalinta Ugu Dambeysa Dunida, inkasta oo waxoogaa kala duwanaan ah oo ku saabsan casriyeynta mustaqbalka. Si cad ayaan u nidhaahnaa, nuqulada had iyo jeer waxay ahaayeen nuqullo aakhirana wixii ay heleen waa inay siiyaan magaca magac iyo magac weyn. Way arki doonaan, laakiin waa inaad noqotaa waxyar oo asal ah markii aan dadaal badan gelinay dhinacyo kale, sidaa darteed waxaan rajeyneynaa inay ku sii wanaajistaan ​​iyadoo la cusbooneysiinayo isugeynta badan ee ku kala duwan. Naxdin
Nuqul kamid ah Maalintii ugu Dambeysay Dhulka
Codsiga Soo Dejinta